अभिनेत्री भूमि पेडनेकर जस्लाई चाहिन्छ एक घण्टाभन्दा बढी सेक्स ! ‘ती व्यक्तिलाई धैर्यता हुनुपर्छ’ « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
अभिनेत्री भूमि पेडनेकर जस्लाई चाहिन्छ एक घण्टाभन्दा बढी सेक्स ! ‘ती व्यक्तिलाई धैर्यता हुनुपर्छ’
१४ श्रावण २०७६, मंगलवार ११:३१
एउटा भिडियोले थुप्रै महिनासम्म चर्चित बनाएको अभिनेत्री भूमि पेडनेकर अनन्या पाण्डेसँग मस्ती गरिरहेको देख्न सकिन्छ । आजकाल उनी बलिउडको निकै चर्चित फिल्म ‘पती–पत्नी और वो’ को रिमेकमा काम गरिरहेकी छिन् ।
यसबाहेक उनको ‘साँडकी आँख’ पनि यसै वर्ष रिलिजको लागि तयार छ । त्यसकारण उनी कुनै न कुनै कारणले चर्चामा छाइरहन्छिन् । फिल्म शुभ मंगल सावधानपछि अभिनेत्री नेहा धुपियालाई दिएको अन्तरवार्ता निकै चर्चित भएको थियो ।
वास्तवमा कार्यक्रममा कुराकानीका बेला नेहाले सेक्सबारे प्रश्न सोधेकी थिइन् ।
सुरुमा नेहाले आयुष्मानलाई सेक्सबिना कति दिन बस्न सक्नुहुन्छ भनेर सोधिन् ।
यसमा आयुष्मानले आउटडोर हुँदा उनी सेक्स बिना बस्न सक्ने जवाफ दिए ।
नेहाले यो प्रश्न भूमिमाथि तेर्साइन् आयुष्मानले तत्काल बोलिहाले, ‘एक घण्टा’ ।
तर आयुष्मान यतिमा मात्रै रोकिएनन् । त्यसपछि उनी भूमिलाई डेट गर्ने इच्छा राख्ने पुरुषलाई टिप्स दिन थाले ।
उनले भने, ‘ती व्यक्तिले बेडमा निकै धैर्यता अपनाउनुपर्छ ।’ यसमा भूमिले भनिन्, ‘हो, मलाई स्लो रोमान्स मनपर्छ ।’ स्मरण रहोस्, उनीहरुले यस्ता कुरा रमाइलाको लागि गरिरहेका थिए । आयुष्मान र भूमिलाई पछिल्लो पटक ‘शुभ मंगल सावधान’ मा सँगै देखिएको थियो ।
प्रकाशित मिति: १४ श्रावण २०७६, मंगलवार ११:३१
सरकारले गर्यो नेपाल भ्रमण वर्षको गीत रचना गर्न आह्वान
सरकारले नेपाल भ्रमण वर्षको आधिकारिक गीत रचना गर्न सार्वजनिक आहृवान गरेको छ ।सन् २०२० लाई
मसिंर २१ मा अभिनेत्री ऋचा शर्माको बिहे
अभिनेत्री ऋचा शर्मा आउँदो मसिंर २१ गते बैवाहिक बन्धनमा बाधिँदैछिन् । उनले ललितपुरस्थित लाबिम मलका
बादल र पराजुलीको “तिमि फुल हौ कि जुन” को म्युजिक भिडियो सार्बजनिक
सुमधुर आवाजका धनि गायक बादल श्रेष्ठको नयाँ गित “तिमि फुल हौ कि जुन” को म्युजिक
राजु परियार र गरिमा विरहीको ‘मेरो मन…’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
राजु परियार र गरिमा विरहीको स्वरमा रहेको गीत ‘मेरो मन…’ सार्वजनिक भएको छ । कृष्ण